Mateu 3 - Библия [Синодальная Библия 1876]
Bhaibheri mune rimwe gore Ndima yeZuva Tsvaga Enzanisa nemaBhaibheri
Dhoneta Taura nesu Apps Bhaibheri Dzvene (XML Files)
Genesisi Ekisodho Revhitiko Numeri Dheuteronomio Joshua Vatongi Rute 1 Samueri 2 Samueri 1 Madzimambo 2 Madzimambo 1 Makoronike 2 Makoronike Ezira Nehemia Esteri Jobho Mapisarema Zvirevo Muparidzi Rwiyo rwaSoromoni Isaya Jeremiya Mariro Ezekieri Dhanyeri Hosiya Joeri Amosi Obhadhiya Jona Mika Nahumi Habhakuki Zefaniya Hagai Zekaria Maraki Mateu Mako Ruka John Mabasa VaRoma 1 VaKorinte 2 VaKorinte VaGaratiya VaEfeso VaFiripi VaKorose 1 VaTesaronika 2 VaTesaronika 1 Timoti 2 Timoti Tito Firimoni VaHebheru James 1 Petro 2 Petro 1 Johani 2 Johani 3 Johani Judha Zvakazarurwa
&nbspPamazuva iwayo kwakauya Johwani Mubhabhatidzi, achiparidza murenje reJudhiya,
&nbspachiti: Tendevukai imwi: nokuti ushe hwokudenga hwava pedo.
&nbspNokuti uyu ndiye wakarehwa nezvake naIsaya muporofita, achiti: Inzwi rounodana murenje, gadzirirai mugwagwa waShe, ruramisai nzira yake.
&nbspIyezve Johwani waiva nenguvo yake yamambava ekamera nebhanhire redehwe pachivuno chake; nezvokudya zvake zvaiva mhashu nouchi hwedondo.
&nbspZvino kwakabudira kwaari Jerusarema neJudhiya rose nedunhu rose rakapoteredza Jorodhani,
&nbspvakabhabhatidzwa naye muna Joridhani vachirevurura zvivi zvavo.
&nbspAsi wakati achivona vazhinji vavaFarisi navaSajusi vachivuya kurubhabhatidzo rwake, akati kwavari: Vana venyoka, ndianiko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunovuya?
&nbspNaizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendevuka.
&nbspMusafunga kutaura mukati menyu \_add muchiti\_add*: Tina Abhurahamu baba \_add vedu\_add*, nokuti ndinoti kwamuri: Mwari unokwanisa kubva pamatombo awa kumutsira Abhurahamu vana.
&nbspZvinovo sanhu ratoiswa pamidzi yemiti, naizvozvo muti mumwe nomumwe usingabereki zvibereko zvakanaka unotemwa ugokandirwa mumoto.
&nbspIni zvirokwazvo ndinokubhabhatidzai nemvura mupinde mukutendevuka, asi uyo unovuya shure kwangu unesimba kupfuvureni, neshangu dzake handina kufanira kudzitakura, Iye uchakubhabhatidzai noMweya Mutsvene nomoto.
&nbspRusero rwake \_add ruri\_add* muruvoko rwake, uchatsvaira buriro rake kwazvo, agovunganidzira zviyo mudura, asi hundi ucha\_add i\_add*pisa nemoto usingadzimwi.
&nbspZvino Jesu wakabva Gariri akasvika paJoridhani kuna Johwani, kuzobhabhatidzwa naye.
&nbspAsi Johwani wakamudzivisa achiti: Ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemwi, asi movuya kwandiri \_add sei\_add*?
&nbspAsi Jesu achipindura wakati kwaari: Tenda hako zvino nokuti saizvozvo zvakafanira kuti tizadzise kururama kose. Ipapo akamutendera.
&nbspAsi Jesu, wakati abhabhatidzwa, akabuda pakarepo mumvura: Zvino tarira, kudenga kwakamuzarurirwa, akavona Mweya waMwari achiburuka senjiva, achivuya pamusoro pake.
&nbspZvino tarira inzwi rakabva kudenga richiti: Uyu ndiye Mwanakomana wangu unodikamwa, wandinofadzwa naye kwazvo!